Tag: khuraafaadka warbaahinta bulshada
5 Khuraafaad ee Warbaahinta Bulshada
Isniin, November 2, 2009 Isniin, February 8, 2016 Douglas Karr
Tani waxay noqon kartaa qoraal soo noqnoqday… laakiin runtii waxaan u baahanahay inaan xoogga saaro tan. Waxaan daawaday dhowr shirkadood oo ku turunturoonaya xeeladaha warbaahinta bulshada. Aakhirkiina way ka wada tageen. Su'aasha aanan ka jawaabi karin waxay ahayd maxay markii hore isku dayeen? Waxaan jecelahay in aan ka fikiro baraha bulshada sidii wax kordhiye amp kordhiye aad u xoog badan Haddii aad leedahay aasaas adag oo xiriirka dadweynaha iyo suuqgeynta ah, oo aad dabooleyso labada iibsi